တကယ်တော့, ဥရောပနှင့်အနောက်ပိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျအားလုံးနီးပါးကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုအီတလီနိုင်ငံကနေကြွလာ. ဒါကြောင့်ငါတို့သောက်တဲ့ကော်ဖီအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှာရှိသည် အီတလီအမည်များ.
အီတလီရှိမီလန်မီးရထားဘူတာများမှမိနစ်အနည်းငယ်လမ်းလျှောက်ခြင်းတွင်တည်ရှိသောဤကဖေးသည်၎င်း၏အမည်အားတိကျစွာဖော်ပြထားသည်. ဒီပျူငှါနွေးထွေးသောသင်တို့သည်စားနေတုန်းကဖီးနှင့်သောက်စရာတဝိုက်လမ်းလျှောက်ကြောင်ရှိပါတယ်. ဤ funky ကဖေးသည်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုကြောင်ပုံစံခွက်တွင်အရသာရှိခြင်းနှင့်အရသာရှိလှသည့်ကိတ်မုန့်များသောက်သုံးခြင်းကြောင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်. အဆိုပါဝန်ထမ်းစူပါဖော်ရွေဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြောင်အများစုအမြဲအိပ်ပျော်ကြ, သူတို့သည်ဤလုပ်ဖို့ကြိုက်တယ်ကားအဘယ်သို့.
သငျသညျအီတလီကော်ဖီအကြောင်းကိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောသောအရာကိုကြည့်ဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကော်ဖီနှင့်အရသာအိမ်လုပ်မုန်၏ကျယ်ပြန့်ဒီလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ဒေသခံနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးလူကြိုက်များကော်ဖီအစက်အပြောက်အောင်. ဤသည်နံနက်စာရှိသည်ဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်နှင့်ယူရိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတချို့ကော်ဖီရောင်းချ. ဤသည်ကော်ဖီဆိုင်ဖြစ်ပါသည် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်သုံးစွဲနိုင်, WIFI ရှိပါတယ်, ဖြစ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်-ဖော်ရွေ, နှင့်တစ်ဦးကောင်းစွာ-ကောငျးအလှနျအရက်ဘားခဲ့. ဘူတာကနေတစ်ဦးကခုနစ်မိနစ်လမ်းလျှောက်.
Save Train ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏နောက်ရထားခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပြီးအီတလီရှိဘူတာများစွာကိုကြည့်ပါ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcoffee-shops-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)